Madaxda Soomaalida iyo Wakiilada Bulshada Caalamka oo Heshiis Kuwada ah Fulinta Qas abuurka 4.5 (Faallo) | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Madaxda Soomaalida iyo Wakiilada Bulshada Caalamka oo Heshiis Kuwada ah Fulinta Qas abuurka 4.5 (Faallo)
IQRA Read More : Waxaa shacabka Soomaaliyeed u cadaatay in madaxda sare ee dowladda Soomaliya iyo wakiilada bulshada caalamka oo ay horboodeyso UNku ay cadeysteen sida ay heshiiska ugu yihiin meelmarinta qaska loo soo abuuray Soomaaliya. Dadka qaarkood haddii ay u heysteen qasabuurka 4.5 iney hal-abuurkeeda lahayd Soomaalidu, hadda ha ogaadaan in shisheeyuhu qasbayo fulintiisa, taas oo ah hindiso Soomaalida lagu cadaadinayo iney ku sii jirto qaska siyaasadeed.
Bulshada Caalamka oo ku adeeganeysa wejiga Qaramada Midoobey iyo ciidamo calooshooda u shaqeysteyaala ayey dantoodu ka durugsan tahay hamiga ay rabaan madaxa Soomaaliyeed, waxey hindisahoodu yahay ineysan soo noqon madaxda Soomaaliyeed oo waxqabad la’aan awgeed ku kasban waayey kalsoonida shacabkooda oo ka sugayey iney soo gaarsiyaan adeegyada ay leedahay dowlad wanaagsan. Kuma iman wakiilka UNka isbedel dabeeciya, laakiin ujeedo xambaarsan fariin qarsoon ayuu ku yimid isbedelkaas wakhtigan ay Soomaaliya wajaheyso doorashada madaxda qaranka. Wakiilkii ka horeeyey kan hadda la soo xulay wuxuu ku sifoobey masuul jilicsan oo hawl fulintiisu ay ahayd mid daciifa. Bulshada caalamku waxey qasabuurka 4.5 ku raaligelineysa wadamada deriska oo dadaal badan u galay tabagelinta qaskaas, kuwaas shaxda siyaasadeed safka labaad kaga jira, kuna qeyqaadanaya magdhowga askarta uga dhimaneysa la dagaalanka argagixisada oo qorshahiisa ay wataan shisheeyaha fog. Bulshada caalamku marna tixgelinmeyso rabitaanka madaxda Soomaalida ama ha u sujuudaan ama ha u rukuucaaan. Waxa keliya oo ay cabsida ka qabaan waa dareenka shacabka oo aysan dooneyn iney si mideysan u wada kacaan, waana taas mida qasbeysa iney dan u arkaan in la fuliyo qasabuurka 4.5 oo qeybinaya rabitaanka shacabka, iyo weliba iyagoo aaminsan in qasabuurkaas uu u suurtogelinayo wakiilo ay wataan oo matelaya ururada bulshada, sida haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay oo ay aaminsan yihiin iney danahooda u adeegsan karaan. Bulshada Caalamka danta ugu weyn oo ay ka leeyihiin ku sii dhaqanka 4.5 waa iyaga oo aaminsan ineysan Soomaaliya gaarin weli xiligii loo talin lahaa ama ay tashan lahayd, taas oo ka dhalatay siyaasada murugsan ee u dhexeysa Mareykanka iyo Ingiriiska oo hormood u ah Midowga Yurub oo aan weli ka midoobin dhincyo badan kadib dagaalkii qaboobay ee adduunka. Khilaafkaas ka dhexjira reer galbeedka ayaa muujinaya ineysan bulshada caalamka diyaar u ahayn Soomaaliya ama in ay gasho maxmiyad oo hal dal lagu ogaado ama in lagu kaalmeeyo si daacada iney u hesho madaxbanaanideeda. UNka qorshihiisu waa mid salka ku haya inta Soomaaliya ay dhinac u dhaceyso oo go’aan laga gaarayo xaalkeeda oo ay si rasmiya uga heshiinayaan wadamada daneeya iney si kmg ah dhawaq aan waxtar badan lahayn ku maaweeliso Soomaaliya inta lagu jiro xaaladaas si loogu maamulo dhaqanka kalaguurka. Waxaad filataan mar dhow eedeymo loo soo jeediyo madaxda Soomaalida oo lagu fadeexeynayo ceebo badan oo ay la wadaagaan, haddana dhinaca kale ma doonayaan in la maxkamadeeyo eedeysaneyaashaas loo hayo cadeymaha, waxeyna u muuqataa in qasadka laga leeyahay dhaleeceyntaas ay tahay iney si nabada ku baneeyaan xilalka ay hayaan, haddii kalena caalamka intiisa kale laga cunaqabateynayo.
Xisbiga Xuriyadda wuxuu u soo jeedinayaa shacabka Soomaaliyeed iney marka hore si mideysan uga horyimaadaan qasabuurka 4.5, marka xigana ay u midoobaan sidii uusan u soo noqn lahayn madaxweynaha Soomaaliya oo ah qasfuliyaha, kaas oo isku dhex qarinaya urur-diimeedka Damu-Jadiid oo Soomaaliya u horseedey kelitalisnimo iyo qaran-dumis aan laga soo kaban karin, kooxdaas oo ku caanbaxday boobka iyo iibgeynta hantida qaranka, dambileyaal darajo loo magacaabayo iyo maskiin xaqiisa la dulminayo, iyo xulasho ku dhisan daacadnimo shaqsiyadeed ama jecleysi ama naceyb shaqsiyadeed. Qasabuurka 4.5 waxaa ku liibaaney madaxda maamul-goboleedyada cusub oo ku dhaqankiisa lagu soo xushay iyo kuwa iyagoon is ogeyn ku dhuumaaleysanaya federaalka oo ah magac bixinta casriyeysan ee qasfulinta 4.5. Waxaa ah wax lala yaabo in qolooyinka ku doodaya nidaamka federaalka oo ah hab ku dhisan qabiil iney mucaaradaan qasabuurka 4.5 oo isna ku saleysan heybta. Waxey taas muujineysa in xujooyinkooda qabiilka ay iyaga la toosan yihiin, lkn ay u muuqdaan folxumada qaawan ee kuwa kale ay qabyaalada dharka uga dhigeen. Jid walba oo ku arooraya habdhaqanka qabyaalada loogu qeybsanayo dowlada ama degaanka natiijadoodu waxba isma dhamaan oo Soomaalidu waxey horay u tiri “ood qaadis iyo jiidis waa isla guri geyn”.
Xisbiga Xuriyada ( The People Of Freedom ) oo ka tacsiaydeeyey geerida Ugaas C/raxmaan Ugaas Khaliif Xisbiga Xuriyadda ( The People Of Freedom )